ဆံပင် (plazmoterapiya ဦးရေပြား) Plazmolifting - လက္ခဏာများ, contraindications ။ Plazmolifting ကဘာလဲ?
Plazmolifting ဆံပင် - သင်ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရန်လိုအပ်သမျှ
Alopecia နှင့်အတူရုန်းကန်ခုနှစ်တွင်, အမျိုးသမီးကိုမဆိုရရှိနိုင်အလှကုန်ကိုသုံးပါ, ဒါပေမယ့်တောင်မှပုံမှန်အထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုတချို့အခြေအနေတွေမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဆံပင်ကျွတ်ခိုင်မာတဲ့ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်များကိုရပ်တန့်ဖို့အသက်သေထိရောက်မှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမ Analogues ရှိပါတယ်သည့်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာ, ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။
ဦးရေပြားကုထုံး၏ဖော်ပြထားနည်းလမ်း microinjection သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆံပင်၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးကုသမှုဖြစ်ပါသည် - Plazmolifting ဖြစ်ပွားမှု၏ 60-80% အတွက် tricology ရောဂါနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်ကူညီပေးသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကို autologous ပလာစမာ၏လူသားအတွက်အရေပြားအောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ပါဝင်ပါသည်။ ဒါဟာ platelets ၏သန့်စင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းများအတွက် centrifugal အတွက် Pre-လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။
အသံထွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပလာစမာ၏ဂုဏ်သတ္တိများ၏ခြယ်လှယ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ : ကြောင့် Plazmolifting '' ဆံပင်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုရှိပါတယ် "ဟုတက်ကြွစွာ platelet မူပိုင်ခွင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏မြင့်အကြောင်းအရာ
ဒေသခံကိုယ်ခံစွမ်းအား၏အားကောင်း။ ကာကွယ်မှုစနစ်၏ stimulation ဘောက်, seborrhea, ဦးရေပြား၏ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများမှကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့, ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏ပြန့်ပွားဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။
တိုးတက်စောင်ရေ။ Plazmolifting ဦးခေါင်းဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုကိုကူညီခြင်းနှင့်သိသိသာသာအရည်အသွေး, အထူနှင့် elasticity တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အောက်ဆီဂျင်များများ, ပရိုတိန်း, ဗီတာမင်နှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ် bulbs ရန်, ပါဝါ, follicles ပွနျလညျထူထောငျဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဆိကြည်ဂလင်း၏ဆုံးမပဲ့ပြင်။ ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး sebum ၏ပုံမှန်ပေးပါသည်။ ဆံပင်၏ရလဒ်များကိုပိုလျှံအဆီထုတ်လုပ်မှုမရှိဘဲအစိုဓာတ်ကိုတစ်ဦးလုံလောက်သောငွေပမာဏကိုလကျခံရရှိပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလေးအဆင့်ဆင့်, ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထဲကတစ်ခုထွက်ယူသွားတတ်၏။ , ကုထုံးမှ contraindications ၏မရှိခြင်းအတည်ပြုရန်ဦးရေပြားနှင့်အတူပြဿနာများများ၏အကြောင်းရင်းရှာက Plazmolifting ဆံပင်ထွက်သယ်ဆောင်ရန် သာ. ကောငျးသညျဟုဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံး trichologist သွေးစစ်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးစံစာမေးပွဲများ၏ပို့ဆောင်မှုခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ကိုင်တွယ်အဲဒီ session မတိုင်မီ 2-3 နေ့ရက်ကာလအဘို့လိုအပ်လျှင်, လူနာအရက်, ဖက်တီးအစားအစာများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်၏အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်, ပိုပြီးရေကိုသောက်ရန်အကြံပြုသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏နေ့တွင်ပြုလုပ်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်လာရန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်လို Plazmolifting သည်:
သွေးနမူနာ။ 100 ခန့် ml ကိုဇီဝအရည်၏သွေးကြောထဲကနေထုတ်ယူနှင့် anticoagulants အတူစမ်းသပ်ပြွန်ထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
processing ပစ္စည်း။ Platelet ကြွယ်ဝ plasma အထူး centrifugal အတွက်မြေတပြင်လုံးသည်အသွေးထဲကခြားနားနေသည်။ သတ္တုဓာတ်နှင့်အခြားအရောနှော၏ဗီတာမင်ကော့တေး - ဒီအဆင့်မှာ, အဖြေတစ်ခုထပ်မံအစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နိဒါန်း။ ရရှိလာတဲ့အရည် mesotherapy ၌ရှိသကဲ့သို့, ဦးရေပြားသို့အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါကိုင်တွယ်ထုံဆေးလိုအပ်သည်ရှားပါးကိစ္စများတွင်, လုနီးပါးနာကျင်မှု့မရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးသည်အလွန်ပါးလွှာသောဆေးထိုးအပ် Apply ။
ရရှိနိုင်သောရောဂါနှင့်သုတေသန၏အခြေခံပေါ်မှာဆွေးနွေးတင်ပြနေတဲ့ trichologist နှင့်အတူကုသမှုသင်တန်း၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ။ ဆံပင် Plazmolifting လုပ်ဖို့ဘယ်လိုမကြာခဏပေါ်စံအကြံပြုချက်များတခါတရံဆရာဝန်4ကုထုံး session တစ်ခုပြဋ္ဌာန်း, 14-20 ရက်အတွင်းတစ်ခုကြားကာလအနည်းဆုံး2ကုသမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ 1-2 လအကြာသိသာခြယ်လှယ်များ၏အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးကသိသာအကျိုးသက်ရောက်မှု - ထူပြီးပိုအခွားဖြစ်လာ, strands လဲငြိမ်း hairline သည်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပျောက်ကွယ်သွား။
ကုသမှု Duration: 1.5-2 နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်ခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ဆံပင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ Plazmolifting အောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကုထုံးစဉ်အတွင်းကရှာဖွေဖယ်ရှားပစ် Alopecia ၏စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းမရှိ, ဟော်မုန်းဟန်ချက်ပုံမှန်နှင့်ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကိုင်တွယ်တစ်ခုသာအလှကုန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်, နှင့်ဆံပင်တဖြည်းဖြည်းမူရင်းအခြေအနေမှပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Plazmolifting - သက်သေခံချက်
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်နည်းပညာကိုစူးရှသောရောင်ရမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များ မှလွဲ. မည်သည့်အသားအရေရောဂါဗေဒအဘို့သင့်လျော်သည်။ Plazmolifting ဦးရေပြားကိုအောက်ပါပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်:
ကြွပ်ဆတ် , အပိုင်းအမြင်;
ရန်လိုဆံပင်ပုံစံ, ဓာတု, အပူနှင့်ဆင်တူဆိုးရွားသောအချက်များတစ်နောက်ခံပေါ်တွင်လျော့ကျဆံပင်ကောက်ကောက်။
အဆိုပြုထားကိုင်တွယ်များအတွက်အဓိကအရိပ်အယောင်ဆံပင်ကိုရိတ်စဉ်းစားသည်။ ဒါကြောင့်ပြင်ပဆိုးကျိုးများကိုခြင်းဖြင့်အစပျိုးလျှင်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအများဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ပေမယ့် Plazmolifting အန်ဒရိုဂျင် Alopecia ကြောင့်တခြားပြင်းထန်ပုံစံများနှင့်အတူကူညီပေးသည်ဆိုပါကအမျိုးသမီးများ၏မကြာခဏတွေးမိ။ Trichologists တက်ကြွ platelets ၏နိဒါန်းဤကိစ္စတွင်အတွက်ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လုံးဝပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ရောဂါ၏အကြောင်းရင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရမည်ဖြစ်ပြီးဆေးထိုးမှသာဒေသအလိုက်အသိအမှတ်ပြုနေကြတယ်, ဒါကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်။
တူညီကျွမ်းကျင်သူများက Plazmolifting ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူကူညီပေးသည်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပါ။ ဆံပင်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှု, မကြာခဏဆေးဆိုး, ဓာတု zavivok နှင့်အလားတူအခြေအနေများထွက်ကျရောက်သောအခါ, တိုးတက်မှုမှသာ 2nd session တစ်ခုအပြီးရောက်လိမ့်မည်။ Alopecia ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ, မျိုးရိုးအလိုက်သို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့ဟော်မုန်းမညီမမျှ၏မူမမှန်စေလျှင်, သင်ပထမဦးဆုံးဆံပင်ကျွတ်၏အမြစ်အကြောင်းမရှိကုသရပေမည်။
တချို့အမျိုးသမီးတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပုံမှန်ဝေါဟာရများအောက်မှာတစ်လလျှင်ထက်လျော့နည်း 0.5 စင်တီမီတာ၏ strands ၏အရှည်နှေးတိုးသတိထားမိ။ ဆံပင်၏ဦးခေါင်းကို Plazmolifting သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ကူညီပေးသည်။ အသံထွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဒေသခံသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်ဇီဝြဖစ်၏ activation မှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့အာဟာရမီးသီးတိုးတက်စေနှင့် "မြုံ" follicles နှိုးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်ကသာနှစ်ကြိမ်ဆံပင် Plazmolifting ဖျော်ဖြေဖို့ဖြစ်နိုင် - ရလဒ်များရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမီနှင့်အပြီးဓါတ်ပုံများထူခြင်းနှင့်အရှည်ဆံပင်ကောက်ကောက်ထဲမှာသိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်။
contraindications - ဆံပင် Plazmolifting
immunologically သဟဇာတဇီဝပစ္စည်းများ၏နိဒါန်းအပေါ်အခြေခံပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ဦးရေပြားဆက်ဆံဖို့အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရှားပါးကိစ္စများတွင်ပါက Plazmolifting အကြံပြုသည်မဟုတ် - လက္ခဏာများနှင့် contraindications ဤအခြေအနေများအောက်တွင်ထိုးထွက်အုပျစိုး:
(ဤသဘာဝအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် non-်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကြောင့်) ကိုယ်ဝန်နှင့်နို့;
မှမတည့် anticoagulants ;
HIV နှင့် AIDS အပါအဝင် autoimmune ရောဂါများ။
ငါရာသီကာလအတွင်း Plazmolifting ပွုနိုငျသနညျး
အဆိုပါရာသီစက်ဝန်းဘာသာရပ်, ကုထုံးဖို့တိုက်ရိုက်နှင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာ contraindication သည်မဟုတ်, platelets မိတ်ဆက်ဤအချိန်တွင်အကြံပြုသည်မဟုတ်။ သငျသညျရာသီကာလအတွင်း Plazmolifting မပွုနိုငျအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေပဲနှစ်ခု:
ငါနွေရာသီ Plazmolifting ပါဘူးနိုင်သလား?
ယခုနှစ်အပူဆုံးအချိန် Photo-အိုမင်းဒေသခံကိုယ်ခံစွမ်းအား၏လျှော့ချရေးနှင့်အသက်အရွယ်အစက်အပြောက်များဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ တင်ပြလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ပေးသည်, ဒါကြောင့်သင်ပင်အကြံပြုထားသည်, Plazmolifting နွေရာသီလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နိဒါန်းနှင့်အတူဆိကြည်ဂလင်းများနှင့်ဆံပင်ပိုရှည်သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သောနေဖို့ပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်။
ငါအအေးမိ Plazmolifting ပါဘူးနိုင်သလား?
မဆိုကူးစက်နှင့် feverish အခြေအနေများကုထုံးခြယ်လှယ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ SARS နှင့် Ari နှင့်ဒီ "အအေး" ဖြစ်ပါတယ်, plazmoterapiya ဆံပင်ထွက်သယ်ဆောင်မထားဘူး - ၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်ရန် contraindications ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောင်ရမ်းခြင်း၏ဖြစ်ပျက်မှုအားဖြင့်ရှင်းပြထားသည်။ ထိုအသွေးဆဲလ်ဇီဝအရည်ကုသမှုများအတွက်သင့်လျော်သောမဖြစ်ကြောင့်အရာမှလက်ရှိရောဂါပိုး (ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်), ဖြစ်ကြသည်။ Plazmolifting ဆံပင်အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူသည်အထိရွှေ့ဆိုင်းထားရမည်။ အသှေးကို pre-စစ်ဆေးအရည်အသွေးအထွေထွေသို့မဟုတ်ကူညီပေးပါမည် များ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ session ရဲ့အကြို။
Plazmoterapiya ဆံပင် - ကျွမ်းကျင်သူအမြင်
အဆိုပါဖော်ပြထား technique ကိုရုရှားဆရာဝန်များက (- Ahmerov R. နှင့် R. Zarudiya စာရေးဆရာများ) ကဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်မူပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ "plazmoterapiya" ဆံပင်အဖြစ်မျှထိုကဲ့သို့သောသက်တမ်းနည်းပညာများအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောအမညျကိုသာ "Plazmolifting" ဖြစ်ပါတယ်, ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည့်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု, - ကျွမ်းကျင်သူများကဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတခြားမူကွဲကြောင်းထောက်ပြနေသည်။
အရည်အချင်းပြည့်အသုံးဝင်နှင့်ထိရောက်သောအားနည်းဆံပင်အဘို့အ Plazmolifting trichologists, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် Alopecia ၏ပြဿနာရဲ့အဆိုအရသူကရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လို့မရပါဘူး။ အပြည့်အဝဆံပင်ကိုရိတ်ကုသပေးဖို့, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အခြားကုထုံးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားရပါမည်။ အပြိုင်မှာ, Alopecia ၏အကြောင်းတရားများပပျောက်ခြင်းနှင့်ဟော်မုန်းပုံမှန်အနေနဲ့အထူးကြပ်မတ်ဦးရေပြားစောင့်ရှောက်မှုပေးစနစ်တကျရွေးချယ်ထားသည့်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
ရှည်သောဆံပင်ပေါ် elongated စတုရန်း
ဆံပင် burdock နှင့်အတူ mask
Jellied အမဲသား - စာရွက်
ကီဝီနှင့်အတူဝက်သား - စာရွက်
ဝေါလ်ပေ၏ Panel များ
က Natalia Vodianova အားလုံးမိမိသားသမီးပြသ
အဘယ်အရာကို Vladivostok ထံမှယူဆောင်လာသလော